Tanjon'ny fandaharan'asa DEFIS ny hanatsarana ny fidiram-bola sy ny fiantohana ara-tsakafo ho an'ireo tantsaha marefo any amin'ny faritra iasan'ny fandaharan'asa... Fandaharan'asa mandritra ny 10 taona. Mpamatsy vola be indrindra ny Tahiry iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny Fambolena na ny FIDA. Mamatsy vola ihany koa ny OFID, ny Banky Afrikana ho an'ny Fampandrosoana, sy ny Governemanta Malagasy ary ny mapahazo tombontsoa.
Sehatr'asa telo lehibe no hotanterahana ao amin'ity fandaharan'asa DEFIS ity. Voalohany ny fanatsarana ny famokarana sy ny fahafahan'ny rafi-pamokarana misedra ireo tsindry samihafa mety hihatra aminy. Faharoa ny fampiroboroboana ny lalam-pihariana tsy misy hanavahana ary ny fahatelo farany ny fanohanana ny rafitra ara-pamokarana misy sy ny fandrindran'asa ataon'ny fandaharan'asa.